Wararka Sirta ee Wikileaks Soomaaliya ka sheegay - BBC Somali
Wararka Sirta ee Wikileaks Soomaaliya ka sheegay
Image caption Wikileaks iyo Soomaaliya
Waxyaabaha lagu jeclaystay wararka sirta ahaa ee bannaanka la soo dhigay waxay yihiin hadallada yar ee ay ku qoran yihiin hase ahaatee wax badan daboolka ka qaadaya iyo luuqadda loo adeegsaday arrimaha ama dadka laga hadlayo. Ilaa iyo hadda sooma bxixin warar dhulku la gariiro oo Soomaaliya ku saabsan, laakiin xiiso badan ayay leeyihiin. Tusaale ahaan, wax lagu tilmaamay kulan dhacay bishii May ee la soo dhaafay oo garoonka dayuuradaha ee magaalada Nairobi ay ku yeesheen diplomacy Maraykan ah iyo ra'iisal wasaarihii waqtigaas ee Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Wada hadalku waxaa uu diiradda saarayay weerar celis ay ciidammada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ku qaadeen xoogagga islaamiga ah ee Al Shabaab caasimadda Muqdisho. Waxaa aad looga hadlay raadiyeyaal ama raadiye la'aan. Mr Sharmaarke waxaa uu sharraxaad ka bixiyay sida hawl galka milaterigu uu u guuldarreystay sababtoo ah guuldarro xagga isgaarsiinta ayaa qabsatay.
Qaabka keliya ee cidammadu ku wada hadli karayeen waxaa uu ahaa telefoonnada gacanta lagu qaato, taasoo uu sheegay inay keentay is-afgaranwaa iyadoo ciidammada Midowga Afrika ay dhaqso dib ugu soo gurteen iyagoo si khalad ah u rumaystay in la go'doomiyay. Ra'iisal wasaaruhu waxaa uu diplomacy-ga Maraykanka u sheegay inay aad ugu baahan yihiin isgaarsiinta loo yaqaan walkie talkies iyo qaabab kale ee qalabka isgaarsiinta ee goobaha dagaalka loo adeegsado. Waxaa kaloo uu Maraykanka weydiistay inay ula soo dhaqsadaan lacag shan milyan oo dollar ah oo la sheegay in dowladda Ciraaq u ballan qaadday.
Qoraal dheer oo diplomacy oo bishii June ee sanadkii 2008 la sameeyay waxaa cinwaan looga dhigay dhimashii Cayrow. Dokumentiga sirta ahaa waxaa uu saadinayay in weerarkii cirka ee Maraykanku gantaalka ku dilay Aadan Xaashi Faarax Cayrow, uu yeelan doono wax lagu tilmaamay saameyn dhowr ah oo wanaagsan, ayna ka mid tahay weerarrada Al Shabaab oo waqtiga dhow kala dhantaalmi doona, dagaal xagga hoggaaminta ah oo xarakada ka dhex dhici doona, iyo rajo fiican oo ay yeelanayso dib u heshiisiinta Soomaaliya. Muddo labo sano ka badan arrimahaas midkoodna run ma noqon.
Waxaa jira war isaguna madadaalo ah oo laga helay safaaradda Maraykanka ee magaalada Asmara oo tilmaamaya sida saraakiil sare oo Eritrean ah ay u bilaabeen aflagaaddo farxad muddo gaaban socotay markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Maraykanka, Barack Obama.
Xiriirka labada waddan waqtigaas ma wanaagsaneyn. Maraykanka, Qaramada Midoobay iyo qaar kaleba waxay si ku celcelis ah ugu eedeeyeen Eritrea inay taageerayso Al Shabaab-ka Soomaaliya. Sidaasi darteed, ayaa danjiraha Maraykanka iyo xaaskiisa waxaa lagu marti qaaday inay maalin qado kala qayb galaan siyaasiyiin sar-sare oo Eritrean ah beer uu leeyahay agaasimaha maaliyadda ee dowaldda Eritrea, oo warka sirta ah uu ku tilmaamayo inuu yahay ninka ka dambeeya dhibaatada dhaqaalaha ee dalkaas ka taagan. Sida uu sirta ugu qoran yahay, ma cadda in American-ku ay qadada jeclaysteen. Qadada waxaa lagu cunay geed qodxa leh hoostiis oo ku yaalla tog dhaqxaan badan. Danjiraha iyo xaaskiisa waxaa la siiyay hilib ido la shiilay oo lagu daray malab iyo suugo basbaas ah, dushana looga shubay caano dhanaan oo garoor oo kale ah. Waxaa dalkaas looga yaqaan Sewa, afka Ingiriiska eraygaasi waxaa uu noqonayaa bullaacad.
Inkastoo ay Maraykanku si weyn u qaateen saaxiibtinimada ay muujinayeen Eritrean-ku haddana warka sirta ah waxaa uu xoogga saarayaa sida American-ku uga walaacsan yahay xiriirka dalkaas kala dhexeeya Al Shabaab. Warkaasi waxaa uu tilmaamay sida sarkaal sare oo Eritrean ah uu u qiray inay xiriir xaddidan la leeyihiin Xarakada Al Shabaab.
Warka sirta ah waxaa uu sheegay in Maraykanku si caddaan ah uga digay Eritrea inay cawaaqib aad u badan la kulmi doonto haddii ay sii waddo taageerada ay siiso Al Shabaab.
War ka mid ah wararka sirta oo sanadkii hore la qoray waxaa uu muujinayaa sida maamulka cusub ee Maraykanka ee madaxweyne Obama aanu ula dhacsanayn siyaasadda Britain ee ku wajahan Afrika. Warku waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in Britain ay si weyn u qaadato arrinta Soomaaliya sababtoo ah dad badan oo Soomaaliya ka yimid ayaa ku nool Britain, waxaana jirta wax lagu tilmaamay khatar dhab ah oo xagga ammaanka ah oo dadkaasi ay u geysan karaan dalka Britain.
Laakiin Americanku ma niyad fiicna, waxayna sheegeen in siyaasadda Britain ee Afrika ku aaddan aanay meelna ku wajahneyn, ayna ku guuldarraysatay inay dejiyaan sida arrimuhu u kala muhiimsan yihiin, sarkaal sare oo Afrika qaabilsan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain-na waxaa warku ku tilmaamay inuu yahay mid aan soo jiidasho lahayn.